သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်သော နတ်တော်လပြည့်ည... | အိမ်လွမ်းသူ...
သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်သော နတ်တော်လပြည့်ည...
ပထမဆုံး ကျွန်တော် တွေ့ဖူးသော လကျတ်ချင်း..
သာဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်ပါလား ဖိုးလမင်းကြီးရယ်...
အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်ရသော နတ်တော် "လပြည့်ည..."
ကင်မရာက မကောင်းဘူး Zoom ဆွဲတာ ဒီလောက်ပဲရတယ်...
မမြင်ဘူးသော ဘော်ဒါတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးတာ...
ကျွန်တော်နေတဲ့ Accommodation ..အောက်ကနေ ရိုတ်ထားတာ...
လမင်းကြီးလည်း သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး...
10.12.2011 စနေ နေ့ည လပြည့်နေ့...
သဘာဝမှ လွတ်မြောက်လာသော လမင်းကြီး...
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရိုတ်ထားသော ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်...အမှတ်တမဲ့ တွေ့သောကြောင့် ရိုတ်ထားခြင်းပါ။ အားလုံးတွေ့ စေချင်သော ဆန္ဒနှင့်ပါ...။
No Response to "သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်သော နတ်တော်လပြည့်ည..."
JET Audio Player.
Funshion...Movies ကြည့်ရန် ဆော(ဖ်)့ဝဲ...
"UTORRENT...."Application ဖိုင်နှင့် Movies တွေ ဒေ...
ကျော်ခွခြင်သော...သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ''Hotspot Shi...
Window Media Player SKIN..လှလှလေးတွေ အမျိုး(70)......
Photo Slide Show လုပ်ချင်သော သူငယ်ချင်းတို့အတွက်...
ပျော်ရွှင်ပါစေ...MERRY CHRISTMAS !
သူငယ်ချင်းတို့အတွက်... Hotspot Shield...အသုံးပြုပံ...
သူငယ်ချင်းတို့အတွက်...Any Video Converter..ပြုလုပ်...
Adobe Photoshop CS1 Portable..
ကွန်ပြူတာအတွက် HLP Free PC Cleaner....